Usizo lwezimali kubasebenzi: oda yokukhokha, ezimali kanye intela. Indlela ukuhlela isizo leemali kilabo umsebenzi?
usizo lwezezimali ukuze isisebenzi elinikezwayo ngumqashi ngesimo ukheshe noma ngefomu eziphathekayo. Ngezinye izikhathi kukhishelwa njengoba abasebenzi wangaphambili futhi abantu abangesiwona abasebenzi ibhizinisi.
Ayikho into okuthiwa "usizo esiphezulu sezimali" ayinazo isenzo zomthetho. Inchazelo kweThemu le ingatholakala isichazamazwi kwezomnotho. Nguye wachaza ukuthi zezimali usizo isikhulu - lutho kodwa inkokhelo ukheshe noma ukudluliselwa ingcebo ngesimo abasebenzi real abaswele.
Inkokhelo lusito kutenhlalakahle ziqondiswe abasebenzi akuyona isibopho. Akha ingxenye yomholo elicacisiwe ingxenye yokuqala Art. 129 we Code Civil. usizo lwezezimali ukuze umsebenzi ohlwini ulahlekile. Akuqukethe izibopho yokukhokha yayo kanye nezinye izenzo zomthetho.
Njengomthetho, inqubo kanye nemibandela esiklanyelwe yimuphi usizo lwezimali kubasebenzi inhlangano ngayinye, layo isenzo wendawo. Zingaba ngesivumelwano esithethwe ngokuhlanganyela , nokunye. D. yokukhokha usizo lwezimali ngokuvamile wamboza sivumelwano, okuyinto ngemvume njengoba isisebenzi kanye umqashi. idokhumenti onjalo ikontraga. Linikeza iziqinisekiso umsebenzi, amenze ukuvimbela Ukuwohloka isimo uma ziqhathaniswa kwezinkambiso eziqukethwe komthetho wezabasebenzi. Yingakho angase ngosizo lwezimali ilungu labasebenzi uthathwa njengohlaka isimo ezengeziwe yesivumelwano. Ngesikhathi esifanayo ke yakhelwe ukwenza ngcono isimo sezenhlalo lomuntu.
Akunakusetshenziswa ngeke sikukhokhise
usizo lwezezimali ukuze umsebenzi uma kwenzeka ukuthi idinga ukusekelwa ngokwezimali ngokuqondene nezenzakalo zamuva, okumele kuqinisekiswa ukuhlinzekwa kwemibhalo. Singakhuluma mayelana lomshado kanye nokuzalwa komntwana, ukufa kwelungu lomkhaya kanye eziphuthumayo (ukweba, umlilo, njalo njalo. N.). Unganikezwa ngezinto ezibonakalayo iholide, uNcibijane noma yimuphi omunye usuku. Uhlu yonke imicimbi kumele fixed izenzo normative wendawo inhlangano, noma ngokuhlanganyela umsebenzi wenkontileka.
usizo lwezezimali okukhulunywe izinkokhelo Lwezinhlelo ze-non-elikhiqizayo. Kule ndaba, it is a umthombo nzuzo. Njengoba zingekho izincwadi zomthetho zokubasiza impahla singanikezwanga inkokhelo yayo yenziwa kuphela ngokuzikhethela umqashi.
Isisekelo nokuhlinzekwa ukusekela ngokwezimali, noma ngempela isisebenzi izifundiso eziyimiyalo ezahlukene. Ngokwesibonelo, esinye isisebenzi ingabhalwa isicelo semali yosizo. Esimweni lapho, kulandela ukucabangela yinhloko linikeza impendulo omuhle, oda ikhishwa. Le dokhumenti iveza lokhu okulandelayo:
ireferensi ukulawulwa, okuyinto ubeka kungenzeka yokunikeza usizo lwezimali;
Igama eliphelele kumuntu ukukhokhelwa kunikezwa;
isizathu isinqumo ekuhlinzekweni usizo;
Kungase kube Ezimweni lapho izenzo zendawo normative inqubo kanye yokukhokha yoba abasebenzi sezisunguliwe cha. Naphezu kwakho konke lokhu, ababasekelayo abasebenzi kungukuthi akuvumelekile. Njengoba zizoxazululwa ngokuphelele le nkinga, incike ngokubona umqondisi.
usizo lwezezimali ingase inikezwe umsebenzi kanye isinyathelo womqashi. Ngokuvamile, lokhu kukhokha phezu nanoma celebration noma umsebenzi ngalo. Njengoba kule eyedlule icala nesisekelo ukuze ezicela a ukuthi baxhaswe ngezimali ngeke umyalelo ngemvume yinhloko ibhizinisi.
Usayizi usizo lwezimali lapho umqashi unikeza abasebenzi bayo, futhi kubekiwe umtsetfo lokhona. Yonke imali kushiwo izenzo normative wenhlangano nenhloko inkampani ingafakwa ngokuya eliphelele noma ngeembuyabuyelelo iholo eyisisekelo. usizo lwezimali lokusiza abasebenzi encike ngqo kwi isimo ngabanye, kanye amakhono inkampani ethile.
Izindlela ukusekelwa ngokwezimali
usizo lwezezimali ukuze umsebenzi kungenziwa ukhokhelwe ezimweni ezahlukene. Kulokhu, isizathu isinqumo ngokunikela ngesekelo leemali kungaba lokhu okulandelayo:
nesimo esinzima kwezezimali isisebenzi.
Eziphuthumayo noma izinhlekelele zemvelo. Kulokhu, umsebenzi, owabhalela ekhanda isicelo ukunikeza kuye ngosizo lwezimali kufanele athumele isitifiketi amaphoyisa noma yiziphi ezinye iziphathimandla, okungaqinisekisa ukuthi inani umonakalo.
Ukuba khona izimo zomkhaya. Abasebenzi ngokufaka isicelo kusukela izinkokhelo isitshalo impahla kulawo ngezizathu kumele ifake umnyango ezimali ibhizinisi nemibhalo eyesekayo. Lokhu kungaba isitifiketi somshado noma ukuzalwa kwengane kanye namanye amadokhumenti.
Ukugula kakhulu womuntu osebenza noma umndeni wakhe. Lesi sifo kuhilela ukulahlekelwa ukusebenza umthamo esingaphezu kwezinyanga ezimbili emva kokuthola umsebenzi noma ukukhubazeka. Isisekelo nokukhokhwa lolu hlobo usizo lwezimali kuyoba ukusiza WCC ifomu elibekiwe.
Usuku olugujwa minyaka yonke kuze kube manje.
Isidingo nokuvuselelwa. Lokhu usizo lwezimali ingatholakala ngumsebenzi e indlela yokukhokha ngokugcwele noma kancane izindleko imvume.
Isidingo ukuthuthukisa izimo zokuphila. Usizo olunjalo umqashi zezimali ongase ube on ukuthengwa izindlu, kanye nokwakhiwa yayo noma ukwakha kabusha. Kulokhu, umsebenzi kufanele anikezwe esitifiketini sokubhaliswa kanye nezinhlangano esiphezulu sendawo nesidingo kuthuthukiswe izimo zokuphila futhi irisidi yokukhokha izindleko ezivelayo.
Umcashi angasifaka nayo izonikezelwa isizo leemali kilabo isisebenzi uma ukufa. Isizathu yokukhokha salo ukushonelwa esiseduze isisebenzi noma siqu sakhe. Ukusekela imibhalo izinkokhelo ezinjalo okuzokhishwa ikhophi isitifiketi sokufa, kanye nalabo ephepheni, okuyinto lizobonisa ekukhokhweni ezinkonzweni zemingcwabo.
On yini noma cha lelipelwe ngosizo lwezimali izenzo zokulawula zendawo, futhi ezimele ezimali okufakiwe. Esimweni lapho inhlangano ibheka ukukhuthazwa umsebenzi ingxenye yezimali lomholo wakhe ngomsebenzi, le mali ziyabonakala ku-akhawunti loan ayisikhombisa, okuhlanganisa zasemizaneni izisebenzi lomholo ngokubamba iqhaza kwabo ngokuzimisela enqubeni ukukhiqizwa.
Esimweni ukuthi accrual nokukhokhwa kwezintela aid zenziwa ngokusho kwesitatimende eyabhalwa umsebenzi, konke kubonakala ku-akhawunti loan ayisikhombisa nantathu, okuyinto uyakucabangela izibalo enziwe izisebenzi okunye okwenziwayo.
ngosizo lwezimali unganikezwa abasebenzi wangaphambili. Kulokhu, zonke izinkokhelo okufanele ibonakale kuzo amaphuzu ayisikhombisa lesithupha uyakucabangela ukusebenza nge abakweletwayo ezahlukene kanye abakweletayo.
akhawunti debit, eyohlanganisa zonke izimali ezikhokhelwayo, futhi ungumthombo ngezimali. Kumele kube impoqo wabonisa ukuze sisize. Uma usebenzisa inzuzo zeminyaka langaphambilini ezidonswe count ayisishiyagalombili nane, futhi yokusebenza imali kwehle ngo-debit ayisishiyagalolunye nanye ezilotshwe nanoma iziphi ezinye izindleko.
Uma umsebenzi ukwesekwa ingenye ingxenye inkokhelo, accountant kufanele abe ukubeka wiring? usizo Material kulokhu kubonakala 20, 26 noma 44 Sch. ezidonswe (Rm 70).
Izimali ezinhlanganweni isabelomali
Ikhodi ngezinto ezibonakalayo, okuyinto ikhokhelwa izinhlangano zomphakathi ilwe bill - 211. imihlahlandlela Lokhu ezimali alawule Ministry RF Wezezimali kusukela 10.12.2004, inani 114n. I-oda kwesicelo isabelomali ngezigaba amaphuzu ikhodi, okuhlanganisa ngezinto ezibonakalayo ukuze abasebenzi wangaphambili.
lezo zimali kumele sikhokhwe ngezithukuthuku zabanye imali noma ukuphepha komphakathi. Kuyinto, ngokufanele, amakhodi 290 futhi 260. Kodwa kumele ukuthi isimo sinjani, nokuhlinzekwa kwanoma yimiphi usizo lwezimali ngokuqinisekile sibonakala ngokwanda izenzo zomthetho ezifanele.
Imisebenzi intela engenayo
Ngakho, umqashi wakhipha umyalelo owawuthi financial aid kumele inikezwe umsebenzi. Intela ngesikhathi esifanayo libhekene ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. usizo lwezezimali ukuze akuhlangene ne ukuqashelwa umsebenzi akunandaba. Yingakho bekungabandakanyi labo izindleko inhlangano enkulu ekwakhekeni imikhiqizo yayo. Lezi izinkokhelo okukhulunywa ngayo Art. 270 (p. 23) RF TC. Lokhu isimiso luthole ukuthi inani usizo akufakiwe nokwenza isendlalelo sokubala yentela ngemali engenayo.
Non-encani yentela ngosizo lwezimali
Kukhona ezinye izinhlobo usizo lwezimali lokusiza abasebenzi, ukukhokha ukuthi, akukho kwesibopho ukushaja le umshuwalense, kanye ugcine kwentela yengeniso, uma umqashi enikeziwe ilitshe usizo lwezimali isikhulu. Intela kulokhu alinikezi sokubalwa iyiphi amaphrimiyamu noma kwentela yengeniso. Lokhu kusebenza yesikhathi esisodwa amacala maqondana ezihlukahlukene isimo esiphuthumayo, kanye mayelana nokwamukelwa noma ukuzalwa kwengane, ngesikhathi kushona isihlobo esiseduze noma isisebenzi. Umthetho uhlinzekela eziningi nezinye izinzuzo ezihambisana nezindaba intela ngezinto ezibonakalayo.
ubunjalo okubhekiswe lezinkokhelo
Ukunikela isizo leemali ngesikhathi esiphuthumayo, ukufa noma lokuzalwa lungekho ngaphansi iminikelo umshwalense futhi kwentela yengeniso. Nokho, lokhu inzuzo kuphela ukusetshenziswa uma kwenzeka ukuthi umsebenzi uzokwenza imibhalo isitatimende asekelayo. Zingaba usizo izikhulu eziphuthumayo Izimo Ministry, kanye namakhophi lokuzalwa noma ukufa, nokunye. D. Uma kudingekile ukuqinisekisa izinzuzo imibhalo angekho, kungenzeka abahloli isamba esingu-e lemali amaphesenti amabili ligodliwe intela imali uhlolwa iminikelo eyengeziwe siqu futhi ibalwa izinhlawulo.
Lungekho ukukhomba usizo kulabo ezimweni lapho sekwenziwe ukunikeza yomusa. Ngokwesibonelo, inkampani ngokwa bazilungisele umshini noma ukuhlela nokwenza amalungiselelo omngcwabo.
Izici isicelo okukhishiwe
Ukukhokhwa kwentela usizo target impahla has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo. Uma lwezimali Kuye kwanikezwa ngokuqondene isimo esiphuthumayo, kufanele sithole isisulu. Ukugunyaza nokukhokhwa usizo olunjalo kanye nanoma yiliphi ilungu lomndeni wesisebenti, owafa ngenxa esiphuthumayo. Injongo eyinhloko support isinxephezelo okudalwa impahla noma ukulimala siqu. Ngakho izingqinamba usayizi izikhathi nomthetho alisho amanani.
Uma eshona isisebenzi oyilungu lomkhaya wakubo lathi? Ministry Ezezimali wathi ukuthi abazali, umyeni (unkosikazi) nezingane.
Inhlangano ka ngezinto ezibonakalayo umsebenzi ngesikhathi kushona elinye ilungu lomndeni wakhe bangasizwa. Lolu hlobo lwe-ukusekelwa ngokwezimali futhi uwela ngaphansi uhlu izinzuzo lungekho ngaphansi kwentela yengeniso futhi iminikelo umshwalense. Lokhu yokukhululwa kungenzeka esetshenziswayo maqondana nokufaka noma abasebenzi wangaphambili kwenhlangano, asebathatha umhlala.
Uma ukukhokha abasebenzi imali noma nginikeza kubo izipho eziyigugu lapho kuzalwa umntwana kufanele kucatshangelwe ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Okunjalo zezimali umshwalense usizo iminikelo kanye kwentela yengeniso ngeke ekhokhwa. Nokho, lokhu inzuzo kuphela ukusetshenziswa phakathi nonyaka walo wokuqala ngemva kokuzalwa kwengane. Ngaphezu kwalokho, ukuze ukhokhe non-zikhokhe intela kuhulumeni ukusetha umkhawulo ngobukhulu. Inani layo yinani ruble yizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu, ingatholakala ku nosana.
Intela Presentation izipho singenziwa kuphela uma kwenzeka ukuthi leli qiniso inikezwe Isivumelwano esenziwe ngokuhlanganyela noma esinye isenzo normative wendawo. Lapho ukubhaliswa umnikelo inkontileka izimali kungukuthi ibalwa.
Ngaphezu kwalezi zinhlobo izinkokhelo, futhi kunenye uhlobo ukusekelwa ngokwezimali, okuyinto naye ungowasendaweni isigaba non-intela. Lolu sizo okubhekiswe ukuba ekhokhelwe umsebenzi ngenxa yanoma yisiphi izidingo. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi inani non-zikhokhe intela ilingana ruble ayizigidi ezine ngonyaka owodwa. Uma inhlangano babenqume ku ekukhokhweni aid in ube usayizi omkhudlwana, kufanele athathe isimo isipho. Kulokhu, intela ngeke kuncike inani ruble ayizigidi kweziyisishiyagalombili ngonyaka. Kulokhu, uzodinga ngemvume itayitela isipho.
VAT kwentuthuko wathola: izibonelo Wiring
Uyini ibhekwa njengengxenye yokudla okunempilo?
Sadovnicheskaya yashayisa unqenqema e Moscow, izithombe, incazelo kanye amaphuzu ezithakazelisayo
Isihloko ulandisa indlela ukususa ipulaki sulfuric ekhaya
Ukubhalisa in izinjini kanye Izincwajana - njengoba esiteji yokuthuthukisa isayithi yakho
Ubani bookies: incazelo eningiliziwe nomlando kumiswa. Laba bameleli be umhlabeleli
Hurghada Ihhotela Golden Five omkhulu ezokungcebeleka eziyinkimbinkimbi
Dolphinarium "Riviera" (Sochi): uhlelo, ikheli, izithombe